गर्भमा छोरा या छोरी के छ ? यसरी थाहा पाउनुहोस् ! » Khulla Sanchar
एजेन्सी : आजकल विश्व बिज्ञान र प्रबिधिमा दिनरात चौगुना फड्को मारिरहेको छ । विज्ञानले संसारलाइ चुनौती दिंदै निकै अगाडी बढिरहेको अवस्थामा दैनिक नयाँ कुराको आविस्कार हुँदै गएको छ । अब तपाइँ हामीले गर्भमा रहेका शिशु छोरा हो कि छोरी भन्ने कुरा थाहा पाउन त्यति गार्हो छैन । जुन अब सुँघेर नै थाहा पाउने एक अध्ययनले बताएको छ । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया तथा ड्युक युनिभर्सिटीले यो तथ्य फेला पारेको हो । उक्त नयाँ अनुसन्धानका अनुसार यदि गर्भवती महिलाको पेटमा छोरा छ भने उनको शरिरबाट एउटा भिन्न प्रकारको गन्ध आउने गर्दछ जबकि छोरी भएको अवस्थामा भिन्न प्रकारको गन्ध आउने गर्दछ । यो गन्धको आधारमा गर्भवती महिलाले छोराको जन्म दिँदैछिन् कि छोरीको जन्म दिँदैछिन् भन्ने थाहा हुन्छ ।
मानिसहरुमा पनि यस्तै सम्भवः लीमर बाँदरमाथि गरिएको यो सफल परिक्षणका अनुसन्धानकर्ताद्वयले यस्तै मानिसहरुमा पनि सम्भव हुने बताएका छन् । यद्यपी गर्भवती महिलाको शरिरबाट निस्किएको गन्धको आधारमा छोरा÷छोरी पहिचान गर्नको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि अनुसन्धान गरिएको छैन ।